Hombodo dzegirazi dzinoitwa sei?
na admin on 20-04-29
Maitiro ekugadzira mabhodhoro egirazi anonyanya kusanganisira: aw Raw zvinhu zvisati zvaitika. Pwanya zvinhu zvizhinji zvegirini (quartz jecha, svutugadzike yesoda, limestone, feldspar, nezvimwewo) kuti uome madhayeti akasviba, uye bvisa simbi-ine zvinhu zvakasvibirira kuti ive nechokwadi chegirazi. ② Kugadzirira kwe ...
Pickles iyo yekuchengetedza kwenguva yakareba kana girazi bhodhoro yakakodzera kwazvo
na admin musi wa 19-12-11
Mabhotoro e-Pickle, mukufunga kwevanhu vazhinji inowanzo kutongwa nemudzi wemidzi snack bhodhoro. Munguva yakapfuura, ivhu revhu semapuranga emabhokisi akachekwa, anodiwa kune imwe neimwe mhuri.Nguva iripo, nemhanyisa yehupenyu, maaples akatanga kupinda mu supermarket, kupinda ...
na admin musi wa 19-12-10
Xuzhou Chuancheng Glassware Co, LTD. iri kambani inogadzira iyo inonyanya kuita girazi mabhodhoro ekugadzira hunyanzvi, yekucheka tekinoroji, yakakwira borosilicate girazi zvigadzirwa. Iyo kambani ine mvura iri nyore, nyika uye mweya wekufambisa, padyo neLianyungang port. Tine 5 otomatiki p ..
Chigadzirwa chedu chikuru
na admin musi wa 19-12-09
Fekitori yedu inogadzira zvinopfuura mazana matatu emhando dzakasiyana: Huchi yegirazi bhodhoro, jamu yegirazi bhodhoro, girazi revhiniga, bhodhoro revhiniga, bhodhoro remafuta, bhodhoro remafuta, bhodhoro rewaini, chinwiwa chebhodhoro, girazi remvura bhodhoro, waini yemichero bhodhoro, waini yewaini yehutano ...